Akanakisa Lycopene Mugadziri uye Fekitori | CCGB
Marigold kubvisa Lutein
Yakakwira-mhando Tomato Kubva kuXinjiang
Iine patent tekinoroji muChina neUnited States, iyo yakakosha tekinoroji yekuvandudza uye kushandiswa kwetamato kugadzira maindasitiri yakahwina mubairo wechipiri wekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji yenyika.
Kunobva Botanical: Tomato
Active Zvinosanganisa: Lycopene, Phytofluene, Phytoene
Basa Rinotsigirwa: hutano hwemwoyo uye hutano hweprostate, hunobatsira kudzivirira DNA uye kukuvara kwesero, anti-radiation, inovandudza hutano hweganda.
Ine Yakakwira-mhando Tomato Ganda Uye Mbeu Kubva kuXinjiang Province SeRaw Raw
Isu tinotora lycopene kubva kuXinjiang nyanya nyoro ganda mbeu kuburikidza neyakajeka tekinoroji. Rucheno rwechigadzirwa runogona kusvika kupfuura 90%. Zviratidzo zvengozi dzakadai se benzopyrene uye dioxin inogona kusangana nemitemo yeEU.
United States Patent: US 9,434 886, B2
 Yese yekutengesa keteni, wega chirimwa chigadziko
 hombe-pamwero otomatiki-yekugadzira mutsara, ine mhando yepamusoro
Pat United States Patent: US 9,434 886, B2
 Isu tinosarudza madomasi emhando yepamusoro kubva kudunhu reXinjiang, shandisa tekinoroji yedu yakasarudzika patent kuti titore lycopene kubva padomasi peel, lycopene crystal yezvinhu inodarika 90%.
Benzopyrene, dioxin uye dzimwe njodzi zvinoenderana nematanho eEU.
☆ Mafuta eLycopene 6% & 10% HPLC
☆ Mvura-inogadziriswa Lycopene 5% HPLC
Gara kure nechiedza chakasimba uye kupisa; munzvimbo inotonhorera, yakaoma; Yakazara uye yakasimba pasuru, pasherufu hupenyu hwapfuura mwedzi makumi maviri nemana mupakeji yekutanga isina kuvhurwa Pakangovhurwa mashandisiro ekushandisa zvirimo nekukurumidza.
1kg Alu Bhegi * 25 / katoni dhiramu
20kg Pe atorwa dhiramu
2.5kg Alu Bhegi * 10 / katoni dhiramu
Zvadaro: marigold mushoma-zeaxanthin